Hawiye iyo Daarood Beeshee Qaadan doonta wasaaradaha ugu muhiimsan? | Wararka TV
Hawiye iyo Daarood Beeshee Qaadan doonta wasaaradaha ugu muhiimsan?
Published on March 7, 2017 by wartv · No Comments
Waxaa Dhawaan la filayaa inuu Ra’isulwasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ku dhawaaqo golihiisa wasiirada oo ay shacabka Soomaaliyeed u hanqal taagayaan inay mar arkaan waxqabadka dowladda cusub oo uu majaraha u hayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Haddaba waxaa jiro loolan adag oo u dhaxeeyo beelaha Soomaaliya kuwaas oo mid kasta ay dooneyso inay hesho boosaska ugu muhiimsa golaha wasiirada gaar ahaan wasaaradaha loo yaqaan (A iyo B).
Marka aad fiiriso beesha Hawiye waxaad dareemeysaa inuu loolan adag dhexdooda ka socdo kuwaas oo isku heystaan sidii ay beel kasta u heli laheyd wasiirada ugu muhiimsa ee Hawiye kusoo aadayo.
Sid qorshaha yahay haddii aysan wax iska badalin beelaha Abgaal iyo Habargidir ayaa la filayaa inay helaan wasiirada ugu muhiimsan ee loogu talagalay Hawiye, Halka beesha Murusade la filayo inaysan helin wax wasiir ah maadaama ay qaateen booska Ra’isulwasaaraha Soomaaliya oo uu u matalayo Xasan Cali Kheuyre.
Dhanka kale beelaha Duduble, Gaaljecel iyo Xawaadle ayaa iyaguna dagaal culus ugu jiraan sidii ay golaha wasiirada wax la taaban karo kasoo hooyaan.
Marka loo fiiriyo nidaamka ay dowladda ku dhisan tahay ee 4.5 beelaha ugu tunka weyn ayaa la filayaa inay helaan wasiirada ugu muhiimsa ee uu Xasan Cali Kheyre ku dhawaaqi doono.
Xog aynu helnay ayaa Sheegeysa inay beelaha Soomaaliyeed sidaan u qeybsan doonaan wasaaradaha ugu muhiimsan ee xukuumadda dhawaan la filayo in lagu dhawaaqo:
Beesha Hawiye ayaa heli doonto wasaaradaha Arrimaha Gudaha iyo Amniga qaranka.
Beesha Daarood ayaa la filayaa inay hesho wasaaradda Gaashandhigga iyo waxyabarshada.
Halka beesha Digir iyo Mirifle la filayo inay qaataan wasaaradda Maaliyadda.
Qaabkaan aan u xusnay golaha wasiirada waa sidii ay beelaha Soomaaliyeed u qeybsan jireyn goalaha wasiirada iyadoo la fiirinayo qaabka 4.5 balse xogtaan ayaa ah mid lagu kalsoonaan karo oo laga helay illo wareedyo ku dhaw dhaw xafiiska Xasan Cali Kheyre.
Xaquuda Website-ka Waa Mid Xafidan wararkatv.com
Designed by jaliil